Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News | Page 2
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Page 2
Liiska Musharaxiinta U Taagan Madaxweynaha Soomaaliya Akhriso Magacyadooda.
Guddiga Qaban qaabada Doorashada ayaa ku dhawaaqay inay isdiiwaan galiyeen 24-Musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha, iyadoo la soo gaba gabeeyay diiwaan gelinta Musharaxiinta. Halkan ka Aqriso Magacyada Musharaxinta Rasmiga ah. Sheekh Shariif Sheekh Axmed 2. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke. 3. Cabdiqaadir Cosoble Cali. 4. Maxamuud Maxamed Culusow. 5. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. 6....
Wax ka baro taariikhda Xasan Cali KHeyre oo loo magacaabey R/W Soomaaliya.
Xasan Cali Khayre, ayaa loo magacaabay Raisalwasaaraha cusub ee Soomaaliya. Waxaa uu kusoo nolol-qaatay dalka dibadiisa gaar ahaan dalalka Norway iyo Ingiriis-ka. Waxaana uu heysta dhalashada dalka Norway. Raisalwasaaraha cusub, waxaa uu kasoo shaqeeyay, samafalka, cilmibaarista iyo ganacsiga. Taariiqdiisa:- Xasan Cali Khayre, waxaa uu ku dhashay dalka Soomaaliya sanadkii 1967-dii. Waxaa uu waxbarashadiisa...
Caleema Saarka iyo Dhaarta M/weynaha Dalka Kenya Uhuro oo uu ka Qeyb galey M/weynaha Soomaaliya Farmaajo.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa lagu wadaa in uu maanta halkaa uga qeybgalo munaasabada caleemo saarka madaxweynaha mar kale la soo doortay Uhuru Kenyatta. Wafdiga madaxweynaha waxaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Kenya Danjire...
Saldhigyo ay leeyihiin Al-shabaab oo Kenya sheegtey in Diyaaradaheedu Duqeeyeen.
Diyaaradaha dagaalka dowladda Kenya, ayaa duqeeyay saldhigyo Al Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose ee Koofurta Soomaaliya. Duqeynta ayaa ka dhacday deegaanka Kaanjaroon oo qiyaastii 60km koonfur ka xiga Magaalladda Kismaayo. Sidoo kale waxaa jira warar kale oo sheegaya in diyaaradaha ay duqeeyeen deegaanka Beer-naas, oo 60km u jira Magaalladda...
Dalka South Afrika oo Kooxo Hubeysani ku Toogteen Imaam Masjid Iyadoon la Garaneyn Sababta ka Danbeysa.
Kooxo hubeeysan ayaa masjid ku yaal magaalada Durban ee dalka koonfur Afrika toori ku dilay Imaam Masjid, ayagoo sidoo kale dhaawacyo u geeystay laba kale. Sedex nin ayaa gudaha u galay masjid weyn kadib salaaddii duhur, ayagoo sitay hub, waxayna toori ku weerareen qaar kamid ah dadkii Masjidka ku cibaadeeysanayay,...